Fiat CEO kwuru na Apple ekwesịghị ime naanị ụgbọ ala | Esi m mac
Fiat na Chrysler CEO enweghị nchegbu banyere nkwado Apple arụ ọrụMana ọ dị ka mgbe ọ bụla Apple na-eme ụgbọ ala, onye isi nke Fiat na Chrysler chere Apple Ekwesịrị m ịhapụ isi isi ọwụwa ahụ.
Sergio Marchionne bụ Onye isi oche nke Fiat Chrysler, ma dị na el Geneva Motor Show ebe ọ zara ụfọdụ ajụjụ ndị ntaakụkọ jụrụ ya. Mgbe Apple chọtara onwe ya n'etiti asịrị banyere ụgbọ ala nke aka ya, Marchionne enweghị ihere ikwu okwu n'echiche ya na Apple nwere ike ịleba ụgbọ ala nke ya, jiri ya atụnyere "ọrịa" na Apple ga-agbake karịa oge.
Ọ bụrụ na Apple nwere mkpa ịme ụgbọ ala, ọ ga-amasị m ịdụ gị ọdụ ka ị dinara ala chere ruo mgbe mmetụta a gafere, ana m ahapụ Marchionne nye ndị nta akụkọ. Ọrịa dị ka nke a ga-abịa na-aga, ị ga-agbake na ha, ọ bụghị ihe na-egbu egbu.
Marchionne kwukwara na ụlọ ọrụ na-arụpụta ụgbọ ala nwere ohere karịrị akụrụngwa iji kwado mkpa nrụpụta nke Apple na-eme ma ọ bụrụ na ọ kpebie iwu ụgbọ ala, na ha ekwesịghị ịga naanị ha. Marchionne kwenyere na Apple kwesịrị mmekọ na ụlọ ọrụ ọzọ, karịa ịbanye "Mgbanwe azụmahịa" naanị ya
'Sgbọ ala Apple abụghị ndị ọchịchị, mana Tim Cook nwere njakịrị banyere ọrụ ahụ na-ekwu na nso nso a "Ọ ga-abụ na Christmas Eve", nke na-egosi na ndị mmadụ ga-eji ịnụ ọkụ n'obi na-eche ekpughere ụgbọ ala ahụ nwa oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Fiat CEO kwuru na Apple ekwesịghị ịme ụgbọ ala naanị ya
You chefuru gị Apple ID? Echegbula, naghachi paswọọdụ gị na dị nnọọ ole na ole nzọụkwụ